Zaria Forman sy ny endriny mahafinaritra mahafinaritra | Famoronana an-tserasera
Zaria Forman sy ny fizotrany amin'ny famoronana mofomamy
Zaria Forman io dia manaraka ireto tsipika ireto hanome anarana azy ho toy ny artista ranomandry. Amin'ny asany mahita ranomandry amin'ny habe isan-karazany isika fa nangoninay tamin'izany fotoana izany mba hamela anay somary sahirana amin'ny fitsaboana mahafinaritra amin'ny teknikanay miaraka amin'ny mofomamy hahafahana mamorona sanganasa tsara.
Raha niaraka taminy isika omaly mofomamy rosemary, tonga ny fotoana ho an'i Forman sy mahalala ampahany amin'ny fandalinany miaraka amin'ny fizotran'ny famoronana amin'ny sanganasany. Mpanakanto iray izay manokatra ny làlana mankamin'ny habakabaka manokana iasàny miaraka amina sanganasa marobe ary avy aiza io hatsiaka io sy io ranomandry io ho singa lehibe indrindra nefa tsy manadino ny ranomasina manodidina ireo faritry icébergs goavambe ireo.
Tsy manana fotoana hihaonana mivantana aminy izahay, saingy nanam-bintana ihany izahay niditra tao amin'ny habakabany nanohy gaga tamin'ny zava-kantony. Mofomamy isan-karazany mandeha mankamin'ny feo mangatsiaka izy ireo araka ny aseho amin'ny sary nozaraina.
Toa izany nofonosina 350.org, hetsika manerantany ho an'ny toetrandro ary miasa any amin'ny firenena 188 mahery. Ny sasany amin'ny sanganasany dia natolotra ho an'ny fikatrohana mifandraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Eto indrindra no misy ifandraisany bebe kokoa ny asany rehefa manakaiky ny mari-pana avo kokoa mifandraika amin'ilay fiakaran'ny maripana eran-tany izay ahitantsika ny tenantsika isika.
Eto no ahitantsika ny tena antony manosika azy koa, satria araka ny filazany fa anisany ny ezaka ataonao handray anjara amin'ny fiarahamonina manerantany. Avy amin'ny fandalinany dia asehony antsika koa ny ampahany amin'ny fahaizany mifehy ny mofomamy izay tsy dia misy toerana tokony hadisoana, ary eo indrindra amin'ireo lesoka ireo no "niasany" ny fiezahana hamaha azy ireo ao anatin'ny fetra sasany.
Ianao dia manana ny tranonkalanao, ny facebook-nao y ny instagram for araho ny tontolony mangatsiaka ary mangatsiaka vita amin'ny mofomamy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Zaria Forman sy ny fizotrany amin'ny famoronana mofomamy